मास्क लगाएर नेकपा सचिवालय बैठक ! « Online Tv Nepal
मास्क लगाएर नेकपा सचिवालय बैठक !
Published : 18 March, 2020 8:31 pm
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई अध्यक्ष यसपटक सँगै थिएनन् । यसअघि दुवै अध्यक्ष सँगै बसेर बैठक सञ्चालन हुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निकै टाढा राखिएको थियो । नेताहरु पनि एक अर्काबाट टाढा बसेका थिए । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री समेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल अध्यक्ष ओलीको बायाँतर्फ एउटै लहरमा थिए । उनीहरु सबै पूर्व माओवादी हुन् ।
दायाँ लहरमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, रक्षामन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लुम्बिनी यात्रामा भएकाले अनुपस्थित भए ।
सचिवाल बैठकमा सबै नेताहरुको मुखमा मास्क थियो । उनीहरु एक अर्काबाट टाढै बसेका देखिन्थे । मेच पनि त्यसरी नै व्यवस्थापन गरिएको थियो । अध्यक्ष ओलीभन्दा अन्य नेताहरु तीन मिटर टाढा नै थिए । उनी स्वयंले पनि मास्क लगाएका थिए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गरी गरी एसईई परीक्षा समेत रोक्नेलगायतको निर्णयहरुप्रति बैठकद्धारा प्रशंशा गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणपछि पहिलोपटक सचिवालय बैठक बसेको हो ।